Amahhashi eNoti yiwebhusayithi ebikunikeza amathiphu namasu kusukela ngo-2011 ukuze ukwazi ukunakekela i-equine yakho ngendlela engcono kakhulu: ngothando, ngenhlonipho nangakho konke umgibeli noma umlandeli walezi zilwane okufanele akwazi, njenge izifo zabo zamahhashi noma izinhlobo ezahlukahlukene ezikhona.
Ithimba lokuhlela leNoti Caballos lakhiwe ngabantu abazithandayo lezi zilwane, futhi abangongoti kuzo. Uma ungathanda ukusebenzisana nathi, gcwalisa ifomu elilandelayo ukuze sikwazi ukuxhumana.
Kusukela ngisemncane kakhulu ngabona ukuthi amahhashi yilezo zidalwa ezinhle ongabona ngazo umhlaba kusuka komunye umbono kuze kufike ezingeni lokufunda okuningi ngokuziphatha kwazo. Umhlaba we-equine uyaheha njengomhlaba womuntu futhi eziningi zazo zikunika uthando, inkampani, ukwethembeka futhi ngaphezu kwakho konke zikufundisa ukuthi ezikhathini eziningi zingakususa umoya.
Amahhashi abe yingxenye yempilo yami isikhathi eside. Kusukela ngingu-tadpole bengilokhu ngimangala ngezithombe, futhi nangaphezulu bukhoma. Ngibabheka njengezilwane ezinhle kakhulu, zinhle kakhulu, kepha futhi zihlakaniphe kakhulu.
Owesifazane wehhashi oDressage. Njengamanje usebenza njengomqaphi kanye nokukhishwa kwamahhashi eCelta Equestrian Equestrian Social Center, eHijos de Castro y Lorenzo Livestock. Ngine-gelding yaseSpain-Arab futhi sobabili sisebenza ndawonye kubuciko beDressage. Ngangisasebenzisa isizathu futhi ngangivele ngiwathanda amahhashi. Elinye lamaphupho ami amakhulu ukukwazi ukudlulisa imininingwane eyiqiniso kubafundi bami ezobasiza ukuthi bathuthukise ulwazi lwabo ngalezi zilwane ezinhle, yingakho nami nginewebhusayithi ye-equine.
Ukushisekela amahhashi kusukela emncane kakhulu. Ngiyakuthanda ukufunda nokutshela izinto ezintsha ngalezi zilwane, zinhle futhi zinhle. Futhi ngukuthi uma ubanakekela kahle, uma ubanikeza konke abakudingayo, uzothola inzuzo eningi. Kumele ube nokubekezela okuncane ngamahhashi, ngoba angakhipha okuhle kakhulu kulowo nalowo.